Singobani futhi siyini injongo yalo mgomo wobumfihlo?
Le nqubomgomo yemfihlo ichaza indlela uMH Industry ("MH", "thina" noma "us") isebenzisa futhi ivikela ulwazi lomuntu siqu osinikezelayo uma usebenzisa le website.
Ukwaziswa komuntu siqu ulwazi olukwazi ukukukhomba njengomuntu ophilayo, kungakhathaliseki ukuthi uqobo noma uma lisetshenziselwa ngolunye ulwazi esilubambe noma esingase sibambe. Le nqubomgomo yemfihlo ichaza ukuthi sisebenzisa kanjani futhi sivikela ulwazi lomuntu siqu esiqoqa kuwe uma usebenzisa lewebhusayithi.
Uma unemibuzo mayelana nale nqubomgomo yobumfihlo noma ukusetshenziswa kwethu kolwazi lwakho lomuntu siqu sicela uxhumane nathi. Sicela uye esigabeni esithi "Ungaxhumana kanjani nathi" ngezansi. Kulesi sigaba sabeka ikheli lethu lehhovisi elibhalisiwe, inombolo yethu yocingo kanye nekheli lethu le-imeyli.
Kuthiwani uma ungajabuli nale nqubomgomo yobumfihlo?
Uma ungavumelani nolwazi lwakho lomuntu olusetshenziswa ngokuhambisana nale nqubomgomo yobumfihlo kufanele ugweme ukusebenzisa le website ngokushesha. Sicela uqaphele ukuthi ngeke ukwazi ukuthenga izimpahla noma amasevisi kusuka kithi ngokusebenzisa lewebhu ngaphandle kokuthi uhambise ulwazi oluthile lomuntu siqu ukuze ubhalise ukusebenzisa le website futhi ukuze sicubungula i-oda lakho.
Kuthiwani ngezibuyekezo kulo mgomo wobumfihlo?
Singashintsha le nqubomgomo yobumfihlo ngezikhathi ezithile ngokubuyekeza leli khasi. Kufanele ubuyekeze leli khasi njalo. Ukusebenzisa kwakho okuqhubekayo kwalewebhusayithi ngemuva kokuthi ushintsho lenziwe kule nqubomgomo yobumfihlo kuzothathwa ukuze kubonise ukuthi ufunde futhi wamukela noma yikuphi ushintsho. Akufanele usebenzise lewebhusayithi uma ungajabuli nanoma yiziphi izinguquko kule nqubomgomo yobumfihlo futhi kufanele usitshele ukuthi lezo zinguquko zisho ukuthi awusathokozi ngendlela esisebenzisa ngayo idatha yakho yomuntu siqu.
Iluphi ulwazi lomuntu siqu esikuqoqayo?
Uma ungomunye wamakhasimende ethu (lokhu kufaka kokubili amakhasimende ebhizinisi nabathengi) futhi uma ubhalisa ukusebenzisa amakhasi athile ale webhusayithi kufaka phakathi (isibonelo) ukuze uthenge izimpahla nezinsizakalo ezivela kithi, sizokunika ukufinyelela kulawo makhasi . Singase siqoqe ulwazi lomuntu siqu kuwe njengengxenye yale nqubo yokubhalisa; njengengxenye yenqubo yokuhleleka kwe-intanethi; futhi ukuze uthole imvume yakho yokuvumela ukumaketha okuqondile ukuba kuthunyelwe kuwe. Ulwazi lomuntu siqu esikuqoqa kuwe lungabandakanya:
igama lakho, usuku lokuzalwa nolwazi lokuxhumana (njengekheli leposi ne-e-mail kanye nenombolo yocingo);
ulwazi oluphathelene nokuhlangenwe nakho kwakho nemikhiqizo kanye nezinsizakalo zethu;
I-ID yomsebenzisi wakho we-MH (yiziphi izingubo ezizokunikeza) kanye nephasiwedi (oyomisa). Uzocelwa ukuba unikeze i-ID yakho yomsebenzisi nephasiwedi njalo uma ungena ngemvume ukusebenzisa lewebhu);
ukuthintana kwakho okuthintana ngqo kokuthengisa nokuvuma (sicela ubheke esigabeni esithi "Ukukhangisa Okuqondile" ngezansi ukuze uthole olunye ulwazi);
imininingwane yakho yekhadi lesikweletu / debit; futhi
(ngokuphathelene namakhasimende ebhizinisi kuphela) imininingwane yebhizinisi lakho nemisebenzi yalo, engabandakanya ulwazi oluthile lomuntu siqu.
Lolu hlu aluphelele futhi lungabuyekezwa esikhathini esizayo. Kubonakala kahle kweminye imininingwane yomuntu esingayithola kuwe njengamanje.
Senzani ngolwazi lomuntu siqu esikuqoqayo?
Sizosebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu ngezinhloso zebhizinisi ezisemthethweni, isibonelo:
ukuphatha le website kanye nesivumelwano sethu noma olunye ubuhlobo nawe, kufaka phakathi ukuhlinzeka ngemikhiqizo kanye nezinsizakalo kuwe;
ukuhlaziya indlela oyisebenzisayo ngayo le webhusayithi ngenhloso yokuthuthukisa imikhiqizo namasevisi esiwahlinzayo kanye nemisebenzi yethu yokumaketha kanye nokukhangisa kanye nezinhloso zokucwaninga emakethe ezihlobene nokuthuthukisa okufanayo (singaxhumana nawe ngokwethu noma ucele abantu besithathu ukwenza kanjalo ngenxa yethu - sicela ubheke esigabeni esithi "Sinaba nobani lolu lwazi nge" ngezansi);
ukubhekana nokuphendula noma yikuphi ukuxhumana, uphenyo noma isicelo osihambisa kuso;
ukuthumela ukuthengisa okuqondile mayelana nemikhiqizo namasevisi wethu (kodwa kuphela lapho unikeza imvume evumelekile ukuvumela lokhu - sicela ubheke esigabeni "Ukukhangisa Okuqondile" ngezansi); futhi
ukuhambisana nezibopho zethu zomthetho, ezilawulayo nezinye iziphathimandla ezinhle.
Lolu hlu aluphelele futhi lungabuyekezwa esikhathini esizayo. Kuyindlela ecacile yezinhloso zamanje ezingasetshenziswa ngazo ulwazi lwakho lomuntu siqu oluqoqiwe kule webhusayithi.
Singabelana nobani ulwazi lwakho lomuntu siqu?
Ngaphandle kokuthi kuningi okuningiliziwe ngezansi, ngeke sithumele, sitshengise, sithengise, sisabalalise noma sisebenzise imininingwane yakho kubantu besithathu (okusho noma yimuphi omunye umuntu noma inhlangano) ngaphandle kokuba sinemvume yakho noma sivunyelwe ukuyiveza ngomthetho noma inqubo yomthetho.
Singathengisa ulwazi lwakho lomuntu komunye umuntu noma inhlangano lapho kunesidingo njengengxenye yezinqubo zethu zebhizinisi ezisemthethweni (isib. Uma kwenzeka ukuthi ukuphathwa kwethu noma ukuphathwa kwethu kuzothathwa yinhlangano yangaphandle). Kufanele senze lokhu sizoqinisekisa ukuthi kwenziwa ngokulandela uMthetho.
Kungadingeka ngomthetho noma inqubo yezomthetho ukukhulula ulwazi lwakho lomuntu siqu kumagunya omthetho (ie izinkantolo, izinkantolo, amasevisi noma izinsizakalo zokuphepha). Ukuze silondoloze ubuqotho balewebhusayithi futhi sigcine izithakazelo zamakhasimende ayo nabhalisile, sizohambisana nanoma yisiphi isicelo esinjalo. Ngaphezu kwalokho, kungadingeka ukuthi sikwazi ukudalula ulwazi lwakho lomuntu siqu kuziphathimandla zikahulumeni ngentela noma ezinye izinhloso. Kwezinye izimo singase sinqume ukuthi kunesizathu sangempela sokuba sikwazi ukudalula ulwazi lwakho lomuntu siqu kumagunya omthetho nokuthi ukudalulwa kuzobekwa icala futhi kungokomthetho ngaphansi koMthetho.
Ulwazi lwakho lomuntu siqu lungadluliselwa futhi lusetshenziswe yizinkampani zonke eqenjini le-MH, ezinye zazo ezingaphandle kweChina. Sidlulisela ulwazi lwakho lomuntu siqu kulawo amanye izinkampani ukuze sizivumele ukuba zicubungulwe ukuze zinikeze izinsizakalo.
Ngaphezu kwalokho, kungase kube nezimo lapho kudingeka khona ukudalula ulwazi lwakho lomuntu siqu ezinkampanini zangaphandle noma ezinhlanganweni ukuze sivikele amakhasimende ethu noma izithakazelo zethu ezifanele. Ukudalulwa okunjalo kuzovunyelwa ngaphansi koMthetho okuhlinzekwe ukuthi kwakudingeka ukuvikela lezo zithakazelo futhi kube nokufaka okulinganayo engqondweni yakho.
Ingabe ulwazi lwakho lomuntu luzodluliswa ngaphandle kwe-China?
Idatha esiyibutha kuyo ingabuye isetshenziswe ngabasebenzi abasebenza ngaphandle kwe-China abasebenza kithi noma omunye wabaphakeli bethu. Abasebenzi abanjalo bangase bahlanganyele, phakathi kwezinye izinto, babambe idatha yakho siqu, ukugcwaliseka komyalelo, ukucubungula noma imininingwane yakho yokukhokha kanye nokuhlinzeka ngezinsizakalo zokusekela. Ngokuthumela idatha yakho yomuntu siqu, uyavuma lokhu kudluliselwa, ukugcina noma ukucubungula. Sizothatha zonke izinyathelo ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi idatha yakho iphathwa ngokuphepha futhi ngokuhambisana nale nqubomgomo yobumfihlo.
Lapho sikunike khona (noma lapho ukhethe khona) iphasiwedi okukuvumela ukuba ufinyelele ezingxenyeni ezithile zesayithi lethu, unesibopho sokugcina leli phasi eliyimfihlo. Sikucela ukuthi ungahlanganyeli iphasiwedi nanoma ubani.
Ngeshwa, ukuhanjiswa kolwazi nge-intanethi akuphephile ngokuphelele. Nakuba sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuvikela idatha yakho, asikwazi ukuqinisekisa ukuthi ukuphepha kwedatha yakho kudluliselwe kusayithi lethu; noma yikuphi ukudluliselwa kuyingozi yakho siqu. Uma sesithole imininingwane yakho, sizosebenzisa izinqubo eziqinile nezinhlelo zokuphepha ukuze sizame ukuvimbela ukufinyelela okungagunyaziwe.
Kuthiwani uma usebenzisa le website ngaphandle kweChina?
Uma usebenzisa le website ngaphandle kwe-China, eminye imithetho ingasebenza ekusetshenzisweni kolwazi lwakho lomuntu siqu. Sisebenza ngale webhusayithi ngaphakathi kwe-China. Asikho ngaphansi kwemithetho yasendaweni yezwe lakho futhi le nqubomgomo yobumfihlo ingase ingahambisani nemithetho. Akufanele uhambise ulwazi lwakho lomuntu siqu ngaphandle kokuthi ujabule ngalesi sikhundla.
Kuthiwani ngolwazi olungaziwa?
Singasebenzisa futhi sichaze ulwazi ngokubanzi (okusho ukuthi amakhasimende ngabanye akakwazi ukukhonjwa) ngezinjongo zokumaketha nezinjongo zokuthuthukisa. Lolo lwazi ngeke lube ulwazi lwakho lomuntu siqu ngoba ngeke ukwazi ukubonakala noma ukubonakala kuso. Lokhu kusho ukuthi le nqubomgomo yobumfihlo noma uMthetho ngeke kusebenze.
Sivikela kanjani ulwazi lwakho lomuntu siqu?
Ukuze uvimbele ukutholakala okungagunyaziwe noma ukudalulwa, ukulimala noma ukulahlekelwa kolwazi lwakho lomuntu siqu, sithatha izinyathelo ezifanele zomzimba nezomsebenzi, ezenhlangano nezokusebenza kuze kube sekupheleni, ngokuhambisana nezibopho zethu ngaphansi koMthetho. Lokhu kungafaka ukubethela (ngokwesibonelo, lewebhusayithi yindawo ephephile nokudluliselwa kuye futhi kusuka kule sayithi kuzobethelwe).
Unesibopho sokugcina imfihlo ye-ID yakho yomsebenzisi nephasiwedi ehlobene nokufinyelela kwakho emakhasini athile ale webhusayithi kanye / noma noma iyiphi i-akhawunti owasetha nathi. Uyavuma ukwamukela umthwalo wemisebenzi yawo yonke imisebenzi eyenzeka ngokuphathelene nokufanayo. Akufanele uvumele abanye abantu ukuba basebenzise i-ID yakho yomsebenzisi noma iphasiwedi yakho. Sicela uxhumane nathi ngokushesha usebenzisa imininingwane engxenyeni ethi "Ungathintana kanjani nathi" ngezansi uma ukholelwa ukuthi i-ID yakho yomsebenzisi noma iphasiwedi kungenzeka ukuthi isonakele. Ngeke sibe nesibopho kuwe uma kukhona ukufinyelela okungagunyaziwe emininingwaneni yakho yokungena ngemvume noma umsebenzi ongagunyaziwe kule website ngenxa yomlando wakho wokungena ngemvume waziwa omunye umuntu, ngaphandle uma lokhu kungenxa yokunganaki kwethu.
Naphezu kwemizamo yethu ngokuphathelene nokuphepha kubalulekile ukukhumbula ukuthi i-intanethi ayiyona indlela evikelekile yokuxhumana. Ulwazi lomuntu siqu olunikezwa nge-intanethi lungathathwa ngabanye abantu. Asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha kolwazi lomuntu siqu oluthunyelwe kithi kule website. Uyamukela ukuthi usebenzisa le website ngentengo yakho siqu.
Lewebhusayithi ayihloselwe ukusetshenziswa ngabantwana abangaphansi kweminyaka engu-13 ngakho-ke sicela ukuthi izingane ezineminyaka engaphansi kwe-13 zingathumeli ulwazi lomuntu siqu kulokhu kuwebhusayithi. Sincoma ukuthi abazali nabaqaphi bakhumbuze izingane zabo ukuphatha idatha yabo siqu ngokuphepha nangokuziphendulela kwi-intanethi.
Lewebhusayithi inezixhumanisi kwamanye amawebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, amanye amawebhusayithi angaphandle kokulawula kwethu angase axhumeke kule webhusayithi. Asiwona obhekene nemikhuba yobumfihlo kanye nokuqukethwe kwamanye amawebhusayithi. Kufanele uqaphele futhi ubheke isitatimende sobumfihlo esisebenza kwiwebhusayithi ebucayi.
Amakhukhi nama-beacons ewebhu
Singasebenzisa "amakhukhi" kuwebhusayithi yethu. Ama-cookies amafayela wedatha agcina imininingwane ku-hard drive yakho noma isiphequluli okusho ukuthi iwebhusayithi yethu ingaqaphela ukuthi uvakashele iwebhusayithi yethu ngaphambili. Bakwenza kube lula ngawe ukuthi ugcine okuthandayo kulewebhusayithi, futhi ngokubona ukuthi usebenzisa kanjani iwebhusayithi, singayilungisa ekuthandeni kwakho futhi ulinganise ukusebenzisa kwakho.
Ungakwazi, uma ukhetha, khubaza amakhukhi kusiphequluli sakho futhi ususe wonke amakhukhi okwamanje agcinwe kukhompyutha yakho. Ku-Microsoft Internet Explorer, lokhu kungenziwa ngokukhetha 'Izinketho ZamaThuluzi / Inthanethi' nokubuyekeza izilungiselelo zakho zobumfihlo noma ukhetha 'susa amakhukhi'.
Ungathola ukuthi ungakwenza kanjani lokhu kusiphequluli sakho ngokuchofoza 'usizo' kumenyu yesiphequluli sakho. Noma kunjalo, eziningi zezici zethu zewebhu ngeke zisebenze uma ukhubaza amakhukhi.
Singase futhi sisebenzise izithombe ze-elekthronikhi ezaziwa ngokuthi "ama-web beacons" kulewebhusayithi kanye nokuxhumana okuvela ekusebenziseni kanye / noma ukubhalisa kule webhusayithi, njengama-imeyili okuphromotha. Ama-web-beacons ngokuvamile asebenza ngokubambisana nama-cookies futhi asetshenziselwa izinhloso ezifanayo.
Sifake uhlu olugcwele lwamakhukhi asetshenziswa ku-mh-chine.com ngezansi, kanye nencazelo yalokho okusetshenziselwa ikhukhi. Izingubo ngeke zisebenzise amakhukhi ukuqoqa ulwazi olubonakalayo oluqondene nawe.
i-mh-chine.com isebenzisa i-Google Analytics, isevisi ye-analytics yewebhu eyenziwe yi-Google, Inc. I-Google Analytics isetha ikhukhi ukuze ihlolwe ukusebenzisa kwethu iwebhusayithi yethu futhi iqulunqele imibiko yomsebenzi womsebenzisi.
I-Google igcina imininingwane eqoqwe yi-cookie kumaseva e-United States. I-Google ingaphinde idlulisele lolu lwazi kubantu besithathu lapho kudingeka khona ngokwenza umthetho, noma lapho labo bantu abathathu benza ulwazi ngolwazi lwe-Google. I-Google ngeke ihlanganise ikheli lakho le-IP nanoma iyiphi enye idatha egcinwe yi-Google. Ngokusebenzisa mh-chine.com, uyavuma ukucubungula kwedatha ngawe nge-Google ngendlela kanye nezinhloso ezibekwe ngenhla.
mh-chine.com isebenzisa inani labahlinzeki ababeka futhi amakhukhi kuwebhusayithi yethu ngenxa yethu ukuze bahlinzeke ngezinsizakalo abanikezayo. Uhlu lwawo wonke amakhukhi wesithathu asetshenziswa ku-mh-chine.com nokuthi yini esetshenzisiwe ngayinye evela ngezansi.
Ukubuyekeza nokuthola ukufinyelela noma amakhophi olwazi lakho lomuntu siqu
Uma ngabe yiluphi ulwazi lomuntu siqu olunikezile luphelelwa yisikhathi noma lungalungile, sicela usazise ngokuxhumana nathi nge-imeyili noma ngokuthunyelwe usebenzisa imininingwane engxenyeni ethi "Indlela yokuxhumana nathi" ngezansi.
Uma ufisa ukuthola ukufinyelela noma amakhophi olwazi lomuntu siqu esilubambe ngawe sicela uxhumane nathi ngendlela efanayo.
Uma imininingwane yakho yangasese ingasetshenziselwa izinjongo zokuthengisa ngqo sizokwenza kucace emakhasini afanele ale website. Ngesikhathi esifanayo sizofuna imvume yakho ukuthola ukumemeza ngokuqondile noma sizokuvumela ukuba ukhethe ukutholwa lokhu (kuye ngokuthi yini edingekayo ngaphansi kwemithetho efanele).
Ukuthengiswa okuqondile okuthunyelwe ngocingo noma nge-e-mail, i-SMS, i-voicemail noma ezinye izindlela ze-elekthronikhi esizokunikeza ngendlela elula yokwenqaba ukuthengisa okunye okuqondile ngendlela efanele. Uma wenqaba ukuthengiswa okwengeziwe kwe-elektroniki, ngeke sisuse ulwazi lwakho lomuntu siqu kusuka kumininingwane yethu (s) kodwa ngokushesha ngokusemandleni sizokwazi ukuthi ushintshe ingqondo yakho. Lokhu kusho ukuthi singaqhubeka nokubamba imininingwane yakho (kufaka phakathi imininingwane yakho yokuxhumana) kwifomu elicindezelekile, ukuze uqinisekise ukuthi asixhumani nawe.
Uma kunoma yisiphi esinye isikhathi ufisa ukushintsha ingqondo yakho ngokuthola ukumaketha okuqondile ungakhetha ukuphuma nganoma yisiphi isikhathi. Ungakwenza lokhu noma ngokubuyekeza okuthandayo ngokusebenzisa le webhusayithi noma ngokuxhumana nathi nge-imeyili noma okuthunyelwe usebenzisa imininingwane eseceleni "Indlela yokuxhumana nathi" ngezansi.
Ukuqedwa kwe-akhawunti yakho nokugcinwa kolwazi lwakho lomuntu siqu
Ngokuhambisana noMthetho sizoqinisekisa ukuthi ulwazi lwakho lomuntu siqu alugcinwa isikhathi eside kunesidingo ngenhloso efanele noma thina noma yiziphi izinkampani ezithatha yona.
Sigcina ilungelo lokunqaba isevisi noma ukuqeda i-akhawunti yakho nathi ngaphandle kwesaziso esandulele.
Uma sigcina i-akhawunti yakho noma uma ukhansela i-akhawunti yakho, sizoyivala ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi sizogcina ulwazi lwakho lomuntu siqu ngemuva kwalokho kuphela uma kunesidingo uma kunoma yiziphi izinselelo zomthetho noma ezinye izinkinga. Ngemuva kwalokho imininingwane yakho yomuntu siqu izosuswa noma isuswe ku-database yethu (s).
Lo Mthetho ukunika ilungelo lokufinyelela ulwazi olugcinwe ngawe. Ilungelo lakho lokufinyelela lingasetshenziswa ngokuhambisana noMthetho. Noma yisiphi isicelo sokufinyelela singangaphansi kwemali engu-£ 10 ukuze sihlangabezane nezindleko zethu ekunikezeni imininingwane yolwazi esilubambe ngawe.
Indlela yokuxhumana nathi
Ubumfihlo kanye nenqubomgomo yekhukhi Ikhaya Izigaba - Ukutadisha --Zizi - I-Ribbon ne-Tape - Amaphuzu - Izikhala - Izinkinobho --Ukufakazela --Tassel & Fringe / Ukunciphisa - Ukusekela Izinto Zokusebenza - Izigaba & Izesekeli --Umshini Wokuhlola & Izingxenye --Fabric - Abanye Inkampani - Ukubuka kwe-MH - UMH Industrial - Umlando weMH - Bonisa imibukiso - Ama-Agent ethu --Imigomo yeGalleries - Ividiyo yevidiyo Xhumana nathi Indawo Yendawo --Feedback Community - Ibhulogi - Uhlelo lokusebenza --Sijoyine